Sintomy Cessna 172 Tail dragger G1000 MSFS 2020 - Freeware
Ny Cessna 172 Skyhawk Tail dragger G1000 dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana Skyhawk afaka miatrika sy mivoaka fohy (STOL) miorina amin'ny Lycome 210 HP STC. Ity dia patch an'ny Skybok Asobo noforonin'i Babolu izay manampy fiaramanidina vaovao amin'ny hangar anao. Ny installer automatique dia miorina amin'ny fisie baglu-c172-taildragger-g1000.zip.
Ny maodely 3D an'ny dragger Tail dia namboarina niaraka tamin'ny lozisialy Blender avy amin'ny fanondranana ilay maodely tany am-boalohany an'ny Skyhawk G1000 avy amin'ny Asobo. Ny firafitra sy ny sarimiaina rehetra eo ivelany dia tokony havaozina ary mifanaraka amin'ny famaritana voalohany. Ny kodiarana sy tongotra Bush dia avy amin'ny maodely Asobo c152.
Misy fitambaran'ny atiny fito izay misy kalitao tena tsara, tsara ny atiny maloto.
Ny maodelin'ny sidina dia miorina amin'ny C172 STC 210HP STOL G1000 ary mamela ny fiasa amin'ny maody STOL amin'ny faritra kirihitra.
Ireto ny fanovana ny maodely 3D:
Kodiarana afovoan'ny lalamby
Kodiarana kirihitra lehibe sy milamina
Sportsman STOL Camber Cuffs amin'ny elatra
Fampitomboana ny zoro kapila
Ireto ny fanovana ny maodelin'ny sidina:
Hery bebe kokoa avy amin'ny motera varingarina STC 210HP 4
Kapila 4 (0 °, 10 °, 20 ° ary midina hatramin'ny 40 °)
Ity mod ity dia manaja ny Fitsipika momba ny fampiasana atiny amin'ny lalao avy amin'i Microsoft.
Azonao atao ny manohana ny mpamorona an'ity mod ity (Bagolu) miaraka Vidio kafe aho na amin'ny PayPal
izany add-on azo alaina malalaka ao amin'ny Rikoooo miaraka amin'ny alalana avy amin'ny mpanoratra.
Fametrahana sy famafana ao iray click misaotra ny installer automatique an'ny Rikoooo, miaraka am-pitadiavana auto ilay folder "Community" anao.
Updated on 22 / 08 / 2021 : Version 2.3.1
- Raha jerena ivelany, nanjavona tamin'ny halavirana iray ny atitany
Misaotra an'i Ann0v tamin'ny fanamboarana ny endriny
Updated on 20 / 08 / 2021 : Version 2.3.0
- famatrarana kodiarana bebe kokoa
- Amboary ny transponder banga amin'ny maodely mahazatra
- Fanavaozana ny config & fisie anatiny ao anaty Asobo
Tsy mbola nanomboka ny fanavaozana ny maodelin'ny sidina aho. Ataoko faran'izay haingana!
Tsy mbola namaly ny fangatahako fidirana amin'ireo fisie tsy hita (nafenina) i Asobo. Manantena aho fa hanao izy ireo.
- raha ny 172 Textron kilasika dia manana valizy solika mihidy amin'ny tanky ankavia dia hanana olana mitovy amin'ity fiaramanidina ity ianao amin'ny kinova mahazatra.
Manantena aho fa hankafizinao ity kinova vaovao ity, faly manidina!
Nohavaozina taminy 10 / 08 / 2021 : Version 2.2.0
Fanamboarana bibikely sy fiasa vaovao:
- ny vokatra vaovao amin'ny fipetrahana (loto, lanezy, ahitra, rano ...) misaotra an'i Carbonprop
- bibikely misy tohiny miaraka amin'ny jiro taxi namboarina noho ny PopS738
- ny mpanamory sy ny atitany dia tsy hanjavona intsony amin'ny fiaramanidina (G1000 fotsiny)
- glitch toradroa kely eo ambanin'ny fandresena noho ny Airpac1
Mbola misy asa tokony hatao amin'ity maodely ity, indrindra amin'ny maodelin'ny sidina izay mbola mahery loatra.
Nangataka tamin'i Asobo ny fidirana amin'ireo rakitra tsy hita (voafafa) amin'ny kinova kilasika aho mba hananana kokpit miasa tanteraka. Manantena aho fa homen'izy ireo amin'ny modders izany
Updated on 19 / 06 / 2021 - Version 2.1.4
- Fitaovana rivets raikitra
- Fihetsiketsehana kodiarana rambony raikitra rehefa mihodina
Updated on 03 / 06 / 2021 - Version 2.1.3
- Miasa tsara izao ny cockpit mahazatra! Ny avionics switch dia mety, tsy misy mixup amin'ny bokotra, sns. Misaotra betsaka an'i MikeFear303 nahita ny fanamboarana (panel.xml + systems.cfg)
- BUSH172_LANDING_GEARS comp rakitra tsy hita tao amin'ilay maodely. Misaotra an'i twoseventyinc nahatsikaritra azy
Updated on 31 / 05 / 2021 - Version 2.1.1
- Fikirakira tany tsara kokoa
- firakotra kodiarana amin'ny karazany sasany
Updated on 03 / 05 / 2021 - Version 2.1.0
- Ny propeller dia mihodina amin'ny lalana marina izao
- namboarina ny propeller
- tongotra tongotra namerina namerina
- fanavaozana ny kodiarana sy ny kodiarana
Fanavaozana ny Liveries miaraka amin'ny ANN0V:
- Modely kodiarana 3
- aty madio madio 6
- aty 6 maloto sy / na efa antitra
Fialokalofana feno fotaka ianao izao! Ankafizo ny sidina kirihitralao!
Downloads 1 647
VC Cockpit Virtoaly miasa
Format Fomban'ny Native MSFS (glTF)